Sideed shay oo aadan aniga iga ogayn | Martech Zone
Khamiis, Agoosto 2, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Okay, okay this Midkaan waxaan ka qaadan doonaa Steven. Waa kuwan 8 waxyaabood oo ay dhici karto inaadan iga aqoon:
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan sameeyay riwaayaddii ugu weyneyd ee Heesta Jacaylka abid shaqada. Waxay ahayd xilli dambe, waxaa naga soo hadhay xafiiska 3 waxaanan ka soo galnay Idaacada Internetka. Markii aan dhammeystirey gabagabadii weyneyd, Agaasimihii guud ee agaasimaheyga ayaa soo maray agagaarka koonka - wuxuu walaalkiis u kaxeynayay booqasho uu ku tagayo dhismahayaga cusub. Waan ogahay… samee-samee-samee… Waan ogahay…
Deborah, oo ah walaashay iyo walaashay oo keliya, ayaa ahayd Britannica Britannia (sp?) Gabar jiinis ah bartamihii 80s. Inaad saaxiibbadaa uga hadasho si aan kala joogsi lahayn dabada walaashaa waxay leedahay saameyn nafsi ah oo waarta. Waan kufaraxsanahay iyada inkastoon marar dhif ah hadlayno.
Mid ka mid ah shaqooyinkii ugu xumaa ee aan qabtay waxay ahayd Wakiilka Kaararka Deynta ee Dugsiga Sare. Waxaan shaqeeyey 2 toddobaad weligayna cidna ma saxiixin. Waxaan isku dayay mudo 2 isbuuc ah maxaa yeelay aabahay wuxuu igu yiri waligey iskaba dayn maayo shaqada always waligaa wax baad baran doontaa Xaaladdan oo kale, waxaan bartay Aabbahay markasta sax ma ahayn.
Saaxiibkeyga ugu wanaagsan Dugsiga Sare wali waa saaxiibkeyga ugu fiican, 20 sano kadib. Mike ma akhriyo qoraalkayga - laakiin weli waan la hadalnaa toddobaad kasta. Isaga iyo xaaskiisa waa kuwo cajiib ah.
Toddobaadkan waxaa laga yaabaa inaan ka iibsaday iibsigii ugu qosolka iyo xumaanta badnaa ee shaqadeyda qorista - a 24 ″ tailgate magnet for my car:
Laba xagaa ka hor, waxaad iga heli kartaa khadka tooska ah habeen kasta markaan ciyaaro Rainbow Six on XBox Live.
Bloggeygu hadda wuxuu celcelis ahaan celcelis ahaan si ka fiican $ 500 bishii u yahay dakhli, ilaha ugu weyni waa Xayeysiiska Text Link.
Toddobaadkan dhammaadkiisa ayaan noqon doonaa NPR si looga wada hadlo ka faa'iideysiga ilaha internetka si loo wanaajiyo gorgortanka mushaharkaaga. Waxay ahayd wareysi qurux badan laakiin neef ayaa iga baxday maxaa yeelay waa inaan ku degdegaa shaqada ilaa garaashka gawaarida la dhigto ilaa Idaacadda wax ka yar 20 daqiiqo. Ma hubo sida ay noqon doonto! Waxaan helay wareysiga maxaa yeelay waxaan ka faallooday degel websaydh ah oo aan isticmaalay a Warbixinta Mushaharka Shakhsiyeed si aan ugala xaajoodo mushaharkayga aniguna waxaan ku leeyahay internetka Xisaabiyaha Lacagta.
Waxaan u maleynayaa inaan horay ugu sii gudbiyay dadka kale, sidaa darteed ma doonayo inaan horay u sii wado tan - laakiin waxaan doonayay inaan ka jawaabo!
Foomamka Dhismaha ee leh Foomka loo yaqaan 'FormSpring'
Agoosto 2, 2007 saacaddu markay ahayd 11:24 PM
Xusuusin ahaan waxaan ku faraxsanahay in midkood uu lacag ku samaynayo TLA maxaa yeelay boqolkiiba ma aanan sameynin iskaba daa in xayeysiin waligey la muujiyo .. waxaana isku dayay 3 jeer oo kala gooni ah Xitaa waxaan hayaa sheygooda meesha oo aan shaqeynayaa .. aniga ahaan adeeggu waa mid aan waxba tarayn.
Ma ahan in AdSense ay kafiican tahay laakiin marka la xayeysiiyo xayeysiintooda ayaa soo ifbaxeysa… Waxaan u maleynayaa inaan sameynayo wax ka badan waxyaabo igu filan oo qaldan laakiin waa wax laga xumaado markaan arko toddobaadyo dhacaya iyo inaan nasiib u yeesho inaan sameeyo hal lacag ah.
errr .. ooppsss… ka xumahay dhinaca ku hadaaqaya LOL
Halkaan ku dhag halka TLA. Waxaan aaminsanahay xayeysiiska waa loo qariyey maamulayaasha baloogga. Markii aan helay hal kafaala-qaade, runti waxay bilaabeen inay isku rogaan intaas ka dib. Waxaan u maleynayay inay wax qaldan yihiin sidoo kale waa nidaam weyn.
Agoosto 3, 2007 saacaddu markay ahayd 10:10 PM
Oh waan hayey TLA tan iyo markii ugu horaysay ee la helay laakiin waligay wax xayeysiis ah oo la soo bandhigay ma arkin .. waligay .. Waxaan isku dayay adeega sadex jeer oo kala gooni gooni ah markii ugu dambaysay ee koodhku shaqaynayo in ka badan 3 bilood… walina nada
Xitaa AdSense waxay cadeyneysaa inay tahay rar jahwareer ah… Waxaan lahaan karaa maalmo aan kuhelo aragtiyo macquul ah oo aanan sameyn karin boqol (usbuucyada dhamaadka). Waxaan ubaahanahay guruub AdSense ah si uu iiga caawiyo waxaan u maleynayaa 'Sababtoo ah waan hubaa inaan u maleynayo inaan wax qalad ah sameynayo… qirashada in laga yaabo inay kiiska tahay hadana wali ma caawinayso heerarka jahwareerka ee shabakadaha xayeysiiska midkood.
oh si fiican… ugu filan afduubka faallooyinkaaga post Doug 🙂 waan ka xumahay laakiin waa qodob taabasho leh hadda aniga
Waad ku mahadsantahay qoraalka Link Link.
Ma haysataa meel wanaagsan oo aad wax ka iibsato
birlabta gaariga? Waxaan dhawaan sameeyay
mid waxaan ku qoray boggeyga.
Waad ku mahadsantahay booqashadaada …….
Waxay ahayd qoraalkaaga i dhiirrigeliyey! Waxaan ku dalbaday iyada oo loo marayo Graphicsland oo ku helay 2 maalmood gudahood. Qiimuhu aad buu u fiicnaa, laakiin waxaan ka baqayaa inaanan fiiro gaar ah u yeelan cabbirka ku filan… waa weyn! 🙂
Wanaagsan! Ku farxay qoraaladayda iyo
sawir ayaa caawiyay Weyn ayaa wanaagsan oo
si sahlan loo akhriyi karo. Waad ku mahadsan tahay
xiriir si aad u hubiso qiimaha.
Jeclow magnet-ka. Sidee ku saabsan in astaanta loo sawiro dhinaca gaarigaaga sidoo kale saameynta ugu badan 😉
Waa inaan mar labaad tijaabiyaa TLA mararka qaarkood oo aan arko haddii ay i aqbalaan markan. AdSense waxay ila ahayd 50% aniga bishii hore laakiin kama hadlayno lacagta weyn bu